को हुन् पूजाको मन जितेका यी ‘ह्यान्डसम’ युवक ? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / को हुन् पूजाको मन जितेका यी ‘ह्यान्डसम’ युवक ?
को हुन् पूजाको मन जितेका यी ‘ह्यान्डसम’ युवक ?
admin3weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 87 Views
उनै पूजा विगत केही दिनदेखि फेरि चर्चामा छिन् । तर यसपटक उनको नाम जोसँग जोडिएको छ ती युवकको सम्बन्ध चलचित्र क्षेत्रसँग छैन । ती युवक व्यापारी युद्ध बानियाँ हुन् । पूजा र युद्ध केही दिनदेखि टक अफ दी टाउन बनेका छन् । यो विषयमा पूजा र युद्ध दुवैले मुख भने खोलेका छैनन् ।
पूजाले हालै मात्र ललितपुरमा नयाँ घर बनाएकी छन् । नयाँ घरमा चाँडै नै बसोबास शुरु गर्न लागेकी पूजा बिहेको मुडमा छिन् । पूजा र युद्धको मित्रता बलियो रुपमा अगाडि बढेको छ । कुनै दिन यो जोडीको प्रेम र बिवाहको कुरा बाहिरिए अनाैठो नमान्दा हुन् ।
Previous आज १६ भदौ २०७८, बुधवार : आजको राशिफल
Next महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि किन बैंस आउछ ? यस्तो छ कारण पूरा पढ्नु होस ।